Zute ndị ọkwọ ụgbọala 3 nke Ọrụ Mgbasa Ozi Nnweta Onye Ọrụ | Martech Zone
E nwere ọtụtụ ụzọ iji melite arụmọrụ mkpọsa. Ihe niile site na agba na oku iji mee ihe iji nwalee usoro ọhụụ nwere ike inye gị nsonaazụ kacha mma.
Mana nke ahụ apụtaghị na njikarịcha njikarịcha UA (Ntuziaka Onye Ọrụ) ị ga-agafe ga-aba uru.
Nke a bụ eziokwu ọkachasị ma ọ bụrụ na inwee ọgaranya. Ọ bụrụ n’ị nọ n’obere otu, maọbụ na ị ga - egbochi mmefu ego ma ọ bụ na - egbochi oge, mmechi ndị ahụ ga - egbochi gị ịnwale ụdị aghụghọ ọ bụla n’akwụkwọ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ naanị, ma ịnwee ihe niile ịchọrọ, achọrọ ka elebara anya mgbe niile.
Ilekwasị anya nwere ike bụrụ ezigbo ngwaahịa anyị. N’ime mkpọtụ niile nke njikwa mkpọsa ụbọchị, ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị ilekwasị anya na-eme ka ọdịiche dị iche. Enweghị isi n’ịkpachasị ihe ndozi ị ga - eme site na iji njikarịcha nke na - agaghị enwe nnukwu ọdịiche.
N'ụzọ dị mma, ọ naghị esiri ike ịhụ akụkụ ndị elebara anya bara uru. Mgbe anyị jisịrị ihe karịrị $ 3 ijeri na mgbasa ozi eji, anyị ahụla ihe na-eweta ọdịiche, na ihe anaghị adị. Ndị a bụ, a na-apụghị ịgbagha agbagha, ndị isi atọ kachasị na-arụ ọrụ mkpọsa UA ugbu a:
Mee ka ihe atọ ahụ pịa gị, na usoro aghụghọ njikarịcha ndị ọzọ niile agaghị aba uru. Ozugbo okike, ịchebe, na mmefu ego na-arụ ọrụ ma kwekọọ, mkpọsa gị 'ROAS ga-enwe ahụike zuru oke na ị gaghị enwe ike ịchụ usoro ọ bụla kachasị mma ị nụrụ maka mmezi a na-ahụ anya.
Ka anyị bido na onye kachasị gbanwee egwuregwu:
Ihe njikarịcha okike
Ihe njikarịcha okike bụ ụzọ kachasị dị irè iji bulie ROAS (Laghachite na Ad Spend). Oge. Ọ na-akụpịa atụmatụ njikarịcha ọ bụla ọzọ, na n'eziokwu, anyị na-ahụ na ọ na-eweta nsonaazụ dị mma karịa ọrụ ọ bụla ọzọ na ngalaba ọ bụla.
Mana anyị anaghị ekwu maka naanị ịgba ọsọ ole na ole. Iji dị irè, njikarịcha okike ga-abụrịrị usoro, ịrụ ọrụ nke ọma, ma na-aga n'ihu.
Anyị emepeela usoro niile gbasara njikarịcha njiri mara akpọrọ Nnwale Ihe Ule. Ihe omuma ya bu:
Naanị pasent ole na ole nke mgbasa ozi ị mepụtara na-arụ.
Ọtụtụ mgbe, naanị 5% nke mgbasa ozi na-achịkwa njikwa. Mana nke ahụ bụ ihe ịchọrọ, ọ bụghị ya - ọ bụghị naanị mgbasa ozi ọzọ, mana mgbasa ozi dị mma iji na-agba ọsọ, ma na-agba ọsọ na-aba uru. Oghere arụmọrụ n'etiti ndị mmeri na ndị meriri oke, dị ka ị pụrụ ịhụ n'okpuru. The chaatị na-egosi ad na-eji ọdịiche gafee 600 dị iche iche nke okike, anyị na-ekenyekwa itinye ego na arụmọrụ. Naanị ole na ole n'ime mgbasa ozi 600 ahụ rụrụ n'ezie.
Anyị na-emepe ma nwalee ụdị isi okike abụọ: Echiche na ngbanwe.
80% nke ihe anyị nwalere bụ mgbanwe na mgbasa ozi mmeri. Nke a na-enye anyị mmeri na-aga n'ihu ma na-enye anyị ohere iwelata mfu. Ma anyị na-anwale echiche - nnukwu, echiche ọhụrụ nwere obi ike - 20% nke oge. Echiche na-abụkarị mmanụ, mana oge ụfọdụ ha na-arụ ọrụ. Mgbe ụfọdụ, ha na-enweta nsonaazụ nkwụsị nke na-emegharị usoro okike anyị ruo ọtụtụ ọnwa. Ọnụ ọgụgụ nke mmeri ndị ahụ na-eme ka ọghọm ndị ahụ pụta ìhè.
Anyị anaghị egwu egwu site na ụkpụrụ ọkọlọtọ nke uru mgbakọ na mwepụ na nyocha A / B.
Na nyocha A / B kpochapụwo, ịchọrọ maka ọkwa ntụkwasị obi 90-95% iji nweta oke ọnụ ọgụgụ. Ma (na nke a bụ oké egwu), ahụkarị ule na-achọ obere, incremental uru, dị ka ọbụna a 3% inwego.
Anyị anaghị anwale 3% lifts. Anyị na-achọ ma ọ dịkarịa ala ebuli 20% ma ọ bụ karịa. N'ihi na anyị na-achọ mmelite dị ukwuu, yana n'ihi etu ọnụọgụgụ si arụ ọrụ, anyị nwere ike ịnwale ule obere oge karịa na ule a / b na-achọ.
Approachzọ a na-azọpụta ndị ahịa anyị ọtụtụ tọn ma na-enweta anyị ngwa ngwa ngwa ngwa. Nke ahụ, n’aka nke ya, na-enye anyị ohere itigharị ngwa ngwa karịa ndị asọmpi anyị. Anyị nwere ike ịkwalite okike na obere oge yana obere ego karịa ọdịnala, ụlọ akwụkwọ ochie a / b ga-ekwe.
Anyị na-arịọ ndị ahịa anyị ka ha gbanwee maka ụkpụrụ nduzi.
Mbọn dị oke egwu. Anyị nwetara ya. Mana oge ụfọdụ akara chọrọ ga - egbochi arụmọrụ. Yabụ, anyị na-anwale. Nnwale ndị anyị na-agba nke na-ehulata ụkpụrụ nduzi na-agbatịghị ogologo oge, ya mere mmadụ ole na ole na-ahụ ha, yabụ enwere mmebi dị ntakịrị na ntughari ika. Anyị na-emekwa ihe niile enwere ike iji mezie ihe okike ozugbo o kwere omume, yabụ ọ na-agbaso ụkpụrụ nduzi ọhụụ ka na-echekwa arụmọrụ.
Ihe ndị ahụ bụ isi okwu nke usoro anyị dị ugbu a gbasara nnwale okike. Approachzọ anyị na-agbanwe mgbe niile - anyị na-anwale ma na-agbagha usoro nyocha anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe okike anyị na-agafe na ya. Maka nkọwa miri emi nke otu anyị si azụlite ma nwalee mgbasa ozi 100x, lee akwụkwọ ozi anyị na-adịbeghị anya, Mmepụta Facebook: Etu esi arụpụta ma wepụta Mobile Ad Creative na Scale, ma ọ bụ akwụkwọ ọcha anyị, Arụ Ọrụ Creativemepụta Ọrụ na Advertising Facebook!
Ihe kpatara na ọ bụ oge iji chegharịa Creative dị ka onye isi ọkwọ ụgbọ ala nke ịrụ ọrụ mkpọsa
Kpọ ihe okike dị ka ụzọ # 1 iji melite arụmọrụ bụ ihe a na-adịghị ahụkebe na UA na mgbasa ozi dijitalụ, ma ọ dịkarịa ala n'etiti ndị na-eme ya ruo nwa oge.
Ruo ọtụtụ afọ, mgbe onye njikwa UA jiri okwu njikarịcha okwu, ha pụtara ịme mgbanwe na ntinye ego na ịtụle ndị na-ege ntị. N'ihi njedebe nke teknụzụ anyị nwere ruo n'oge na-adịbeghị anya, anyị enwetaghị data arụmọrụ mkpọsa ọsọ ọsọ iji mee ya ma nwee ọdịiche n'oge mkpọsa.
Thosebọchị ndị ahụ agwụla. Ugbu a, anyị na-enweta ezigbo oge ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezigbo oge arụmọrụ site na mkpọsa. Na micron ọ bụla ị rụpụtara, ị nwere ike wepu aka n'okwu gbasara mkpọsa. Nke a bụ eziokwu karịsịa na gburugburu ebe mgbasa ozi na-agawanye na-adịwanye mma, ebe obere ngebichi pụtara na enweghị ohere zuru ezu maka mgbasa ozi anọ; enwere naanị ụlọ maka otu.
Yabụ, mgbe ị na-ezube ma na-emefu ego bụ ụzọ dị ike iji melite arụmọrụ (yana ịkwesịrị iji nyocha okike), anyị maara na ihe okike na-akụda uwe ogologo ọkpa ha abụọ.
Ná nkezi, ebe ndebe ihe dị ka ihe dịka 30% nke ihe ịga nke ọma nke mgbasa ozi mgbe ihe okike na-eme 70%.
Soro Google Chee
Ma nke ahụ abụghị nanị ihe mere iji nweta laser-elekwasị anya banyere ịmepụta ihe. Ikekwe, ihe kachasị mma mere ị ga-eji lekwasị anya n'ihe okike bụ n'ihi na ụkwụ abụọ ọzọ nke oche UA - mmefu ego na ịchebe - na-abawanye na akpaghị aka. Algọridim ndị dị na Mgbasa ozi Google na Facebook ejirila ọtụtụ n'ime ihe ndị bụbu ọrụ njikwa UA kwa ụbọchị.
Nke a nwere ọtụtụ nsonaazụ dị egwu, gụnyere na ọ na-eme ka egwuregwu ahụ ruo oke. Yabụ, onye njikwa UA ọ bụla na-enweta uru ekele maka mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ enweghị isi. Ndị na-asọ mpi ha nwere ugbu a nweta otu ngwaọrụ ahụ.
Nke ahụ pụtara asọmpi karịa, mana nke kachasị mkpa, ọ pụtara na anyị na-agagharị na ụwa ebe ihe okike bụ naanị uru ịsọ mpi kachasị.
Ihe ndị a niile kwuru, a ka nwere mmeri dị oke mkpa a ga-enwe site na ịchebe na ịhazi atụmatụ dị mma. Ha nwere ike ọ gaghị enwe otu mmetụta dịka ihe okike, mana a ga-etinyere ha ya ma ọ bụ na ihe okike gị agaghị arụ ọrụ ọ bụla.
Ozugbo ịchọtara onye kwesiri ekwusara ozi, na ọkara agha ahụ. Na ekele maka ngwaọrụ ndị dị egwu dị ka ndị na-ahụ anya (nke dị ugbu a na Facebook na Google), anyị nwere ike ịme oke nkọwa nke ndị na-ege ntị. Anyị nwere ike ịhapụ ndị na-ege ntị site na:
“Ikwado” ma ọ bụ ijikọta ndị na-ege ntị na-ele anya
Kewapụ site na mba
"Nesting" ndị na-ege ntị, ebe anyị were ndị na-ege ntị 2%, mata ndị 1% nọ n'ime ya, wepụzie 1% ers ka anyị hapụrụ ndị na-ege ntị dị ọcha 2%
Dị ụdị ndị a na-atụkwasị uche na-enye anyị ohere ịkwalite arụmọrụ na ọkwa ọtụtụ ndị mgbasa ozi ndị ọzọ enweghị ike ịme, mana ọ na-enyekwa anyị ohere zere ike ọgwụgwụ nke ndị na-ege ntị ruo ogologo oge karịa ka anyị gaara enwe ike ime. Ọ bụ ngwaọrụ dị mkpa maka ịrụ ọrụ kachasị.
Anyị na-eme ọtụtụ nkewa ndị na-ege ntị na ọrụ ezubere iche ka anyị wulite ngwa ọrụ iji mee ka ọ dị mfe. Ndị na-ewu Alọ Ọrụ Express Express na-ahapụ anyị ka anyị mepụta ọtụtụ narị ndị na-ege ntị site na iji mkpịsị anya na-eme ihe na sekọnd. Ọ na-enyekwa anyị ohere ịgbanwe uru ụfọdụ ndị na-ege ntị bara naanị ka Facebook wee nwee ike ịka mma atụmanya dị elu dị elu.
Ọ bụ ezie na ndị na-ege ntị a na-eme ihe ike na-enyere aka ịrụ ọrụ, ọ nwere uru ọzọ: Ọ na-ahapụ anyị ka anyị dịrị ndụ na ịrụ ọrụ nke ọma ogologo oge karịa na-enweghị ebumnuche anyị dị elu. Ogologo oge anyị nwere ike ịme ka ihe okike dịrị ndụ ma na-eme nke ọma, nke ka mma.
Anyị abịala ogologo oge site na ndozi edits na mgbasa ozi ma ọ bụ ọkwa isiokwu. Na njikarịcha mmefu ego dị mma, AEO bidding, value bidding, and other tools, now we can nanị ịgwa algorithm nke ụdị mgbanwe anyị chọrọ, ọ ga-aga nweta ha maka anyị.
Agbanyeghi nka ka emefu ego. Kwa Nhazi Facebook maka Akara omume kachasị mma, ebe ndị njikwa UA kwesịrị ịlaghachi azụ site na njikwa njikwa ego ha, ha nwere otu njikwa njikwa ekpe. Nke ahụ ga-agbanwe nke oge usoro nzụta ha chọrọ ịkwụsị.
Yabụ ọ bụrụ na ha, sịnụ, ọ dị onye njikwa UA mkpa iji nwekwuo mgbanwe ka Facebook algorithm wee rụọ ọrụ nke ọma, ha nwere ike akpali ihe omume ha na-na-optimizing maka nso nso nke olulu - iji ngwa ngwa, dịka ọmụmaatụ. Mgbe ahụ, dị ka data ahụ na-agakọ na ha nwere mgbanwe zuru ezu iji rịọ maka ihe omume a kapịrị ọnụ, nke na-adịkarịghị (dịka ịzụrụ ihe n'ime ngwa), ha nwere ike ịgbanwe mgbanwe mmemme ha gaa ihe bara uru karị.
Nke a ka na-emefu ego, n'echiche na ọ na-achịkwa mmefu, mana ọ na-achịkwa na-emefu ego na ọkwa. Ma ugbu a na algọridim ahụ na-agba ọtụtụ akụkụ nke njikwa UA, anyị ụmụ mmadụ ga-ahapụ ka anyị chọpụta atụmatụ, ọ bụghị ọnụ ahịa otu onye.
Ọrụ UA bụ oche nwere ụkwụ atọ
Onye ọ bụla n'ime ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị a dị oke mkpa maka ịrụ ọrụ mkpọsa, mana ọ bụ ruo mgbe i jiri ha mee ihe egwu na ha malitere ịmalite ROAS. Ha niile bụ akụkụ nke ilu ụkwụ nwere ụkwụ atọ. Eleghara otu anya, na mberede nke ọzọ agaghị ejide gị.
Nke a bụ nnukwu akụkụ nke nka nke njikwa mkpọsa ugbu a - na-eweta ihe okike, ịchebe, na ịhazi usoro ọnụ n'otu ụzọ ziri ezi. Mmezi nke a dịgasị iche site na ụlọ ọrụ gaa na ụlọ ọrụ, ndị ahịa na ndị ahịa, na ọbụna izu ruo izu. Mana nke ahụ bụ ihe ịma aka nke njikwa njikwa nnabata ndị ọrụ ugbu a. Maka ụfọdụ n'ime anyị, ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Tags: algọridimAEO na-arịọmkpọsa mkpọsaarụmọrụ mkpọsamgbasa ozi ezubere ichefacebook mgbasa oziquantitative okike uleUa mkpọsa arụmọrụnnweta onye ọrụọrụ nnweta okike
Celtra: Gbanyụọ Usoro Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi